Ukudibana kuququzelela intlanganiso phakathi kwabantu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukudibana kwenza kube lula ukudibana nabantu
Ngendlela eshwankathelwe kakhulu, kunokuthiwa i-Meetup yindawo enikezelwe ukuququzelela intlanganiso phakathi abantu abafuna ukuphonononga, ukufumanisa kunye / okanye ukufunda okuthileKe ukuba uyilo lwegraphic kwaye ufuna ukufunda izinto ezintsha kwabanye abayili, le yindawo yakho.
Ngale nto engqondweni, kweli nqaku siza kukubonisa iinkalo ezine ezibonakala zilula ngokwaneleyo malunga nale ndawo imangalisayo kwaye yiyo Dibana ufumana yonke into.
I-Meetup ikulethela yonke into ukusuka kwezemidlalo ukuya kwiimuvi, ubugcisa, umdaniso nokunye okuninzi. Le ndawo ayikhawuleli kubasebenzisi bayo ngokunxulumene namacandelo, kuba kunokwenzeka ngokwenene ukufumana amacandelo amaninzi afanelekileyo kubantu abanomdla ohlukileyo kunye nezinto abanomdla kuzo.
Akunyanzelekanga ukuba ube yingcali, kuba kunzima okanye kunqabile, umsitho uza kuba kuphela kudidi oluthile lobuchwephesha okanye ukufikelela kuyo kuya kuxhomekeka kuhlobo oluthile loqeqesho. Ngokubanzi, uninzi lwezi ziganeko zivulelekile kuye nabani na ofuna mamela, xoxa kwaye ufunde kancinci malunga nesihloko ekubhekiswa kuso.
I-Meetup ihluza ezo ziganeko zikufutshane, uninzi lwamaqela kunye neziganeko zinokubekwa kwenye indawo engafikeleleki kakhulu. Nangona kunjalo, oku akukuthinteli ekubeni ube yinxalenye yabo kwaye bathathe inxaxheba kwiingxoxo eziqhubeka kwiiforum kwaye banokudibana namanye amalungu ukuze babelane ngezimvo.
Ngaphandle kolu khetho, iMeetup ikwajongana nayo Hluza imicimbi ekufutshane ukusukela apho ukhoyo, ukuze kube lula kuwe ukuya nakweyiphi na kuzo.
Kwakhona unokwenza amaqela akho, ke ukuba unazo naziphi na izimvo, ufuna ukudibana nabasebenzi abathile ukuze nixoxe ngesihloko esithile okanye ukuba ufuna ukuqokelela abantu abaliqela ukuba benze uhlobo lomsebenzi eluntwini, sele Awunyanzelekanga ukuba ulinde de kuvele iqela elifanelekileyoKuba unethuba lokudala amaqela akho kunye neentlanganiso abaza kuziqhuba, ukuze kancinci kancinci ube ngaphezulu kokuthatha inxaxheba, unokuba ngumququzeleli.
I-Meetup inezinto ezintle kuphela, kuba uya kudibana nabantu, uya kuba nakho ukwazi izinto ongazaziyo, uya kuba nakho ukufundisa izinto abanye abantu abangazaziyo kwaye yindlela elungileyo xa kufikwa ekufumaneni iiprojekthi sebenza ukwenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukudibana kwenza kube lula ukudibana nabantu
Iifonti zasimahla zenyanga kaSeptemba
Iimpawu ezili-10 kufuneka usebenze njenge-Freelancer